केपी–प्रचण्डले कम्युनिष्टको बेइज्जत, बदनाम र समाप्त पार्ने काम गरे: विप्लव
साउन १४, काठमाडौं ।
केपी वली सरकार असफल देखिन्छ । केही आन्दोलनका झिल्का पनि देखिने गरेका छन् तर खासै सशक्त आन्दोलन पनि बन्न सकेको छैन । जनतामा असन्तुष्टि र आवेग छ तर आन्दोलनको वातावरण पनि त्यति बलियो छैन ।
यी सारा पक्षहरूलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
यसले विश्व–राजनीतिमा बढ्दै गएको धु्रवीकरण, शक्ति सङ्घर्ष र नेपालको सामरिक भूराजनीतिक महत्वलाई बुझाउँछ । कुनै समय थियो– भारतले एउटै केन्द्रबाट दुई–तीन प्रतिनिधि खडा गरेर सञ्चालन गर्ने । पालोपालो माथि चढाउने र तल झार्ने । जताबाट सत्तामा पुगे पनि आफ्नै पुग्ने, सबैबाट स्वार्थ पूरा गर्ने । तर समय केही फेरिएको छ । अर्कोतिर चीनले विगतमा जस्तो सन्तुलनकारी र रक्षात्मक नीति फेरेको देखिँदैछ । बाध्यात्मक आवश्यकता वा नीतिगत सचेतता जेले भए पनि ऊ सक्रिय देखिएको छ । तर नेपाली जनताले नजिकबाट बुझेका छन हामी आफ्नै बुद्धि, विवेक र शक्तिमा अगाडि बढेर मात्र देशलाई सुदृढ गर्न सक्छौँ ।
कोही कम्युनिष्ट सरकारमा, कोही क्रान्तिमा हुँदा कम्युनिष्टलाई नै समाप्त पार्ने खेल सफल हुन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि जनतामा पाइन्छ नि ? यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो निकै अनैतिक, अमानवीय र कुरूर छ । हामीले कोरोना महामारीमा जनताको भावनालाई कदर गर्दै राज्यविरुद्ध आक्रामक कारबाहीहरू रोक्यौँ । हामीले त कोरोना रोकथाममा सबैसँग सहकार्य गर्ने पनि भन्यौँ । स्थानीय स्तरमा केही ठाउँमा राम्रो सहकार्य पनि भयो तर केपी सरकारले हाम्राविरुद्ध अप्रेसन गर्ने, गिरफ्तार गर्ने, जेल हाल्ने कार्य एकछिन पनि रोकेको छैन । उसको यो अनैतिक, हिंसावादी व्यवहारलाई जनताले पनि बुझ्दै गएका छन् । केपीले बुझ्नुपर्छ– केही कमरेडहरूलाई गिरफ्तार गरेर र जेल हालेर एकीकृत जनक्रान्ति रोकिने होइन, बरु यसले हामीलाई होइन, उसैलाई समस्यामा पार्नेछ ।
हामीले धेरैपटक वार्ताबारे बोलिरहेका छौँ । वार्ताको विषयलाई रहस्य र गुपचुपको विषय बन्न दिनु हुँदैन । सरकार समर्थक मान्छे र उनीहरूका विभिन्न प्रतिनिधिहरूले विभिन्न तरिकाले वार्ताको कुरा लिएर आउने र छाम्ने गरिरहेका छन् । एकातिर कमरेडहरूलाई हत्या गर्ने, गिरफ्तार गर्ने, जेलमा कोच्ने अनि वार्ताको प्रचार गर्ने ! यसको के तुक छ र ?
अरू थप केही विषय छन् कि ?
धन्यवाद । हाम्रो पार्टीका धारणा राख्ने अवसर मिल्यो । अहिले यत्ति